विप्लव समूहका तीन कार्यकर्ता पक्राउ - Everest Dainik - News from Nepal
विप्लव समूहका तीन कार्यकर्ता पक्राउ
दमौली, चैत १२ । नेत्रविक्रम चन्द समूहका तीन कार्यकर्तालाई तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मंगलबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ब्यास नगरपालिका–१४ केशवटारका भेषबहादुर सुनार, ब्यास नगरपालिका–६ शिशाघाटका सुनिल कुमाल र जुम्लाका अमर बुढा रहेका छन् ।
पक्राउ परेकामध्ये सुनार दलित मोर्चा तनहुँको अध्यक्ष, कुमाल अखिल क्रान्तिकारी लमजुङ जिल्लाका अध्यक्ष र बुढा जुम्ला जिल्ला सदस्य हुन् । सुनार र कुमाललाई उनकै घरबाट र बुढालाई बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पाबाट सोमबार राति पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक शिद्धिविक्रम शाहले बताए ।
याे पनि पढ्नुस गौचन हत्याकाण्डका तीन प्रमुख अभियुक्त पक्राऊ
पक्राउ परेकाहरूलाई आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गराइ अनुसन्धान थालिएको छ । उनीहरूको साथबाट चन्दा रसिद बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
चन्द समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न थालेको छ । यसअघि प्रहरीले फागुन २८ गते चन्द समूहका जिल्ला सदस्य प्रेम शाहीलाई बन्दीपुर गाउँपालिका–१ बाट पक्राउ गरेको थियो । रासस
याे पनि पढ्नुस मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी चालकलार्इ कारबाही
नेपाल आइपुग्यो रेल, हेर्नेको घुइँचो, यसरी गरियो स्वागत (भिडियो)
यी हुन् धेरै संक्रमित रहेका काठमाडौंका १० स्थान (सूचीसहित)
पूर्वी नवलपरासीका संक्रमितको मृत्यु
आजदेखि मलमास शुरू: के गर्न मिल्छ ? के मिल्दैन ?
बिजुलीबाट लामो दूरीमा चल्ने विद्युतीय मिनी बस सञ्चालनमा
पेरिसडाँडामा बस्ने भनिएको नेकपा सचिवालय बैठक स्थगित